Dubbiin icciitiin bahaa jira: Kan nama nyaatu nukeessa jira !Gumuz hin Xuqiinaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDubbiin icciitiin bahaa jira: Kan nama nyaatu nukeessa jira !Gumuz hin Xuqiinaa
《Dubbiin icciitiin bahaa jira》
《Kan nama nyaatu nukeessa jira !!! 》
Gumuz hin Xuqiinaa. Nutti Obbolota. Waraabeyyii Guyyaa Waara Qarshiin ummata Ollaa keenya waliin walitti nubuusee Soofaa irra tahee kolfutu jira. kan Quuqamtoota Qerroo keenyyaa fi Polisoota keenya harka qullaa bobbaasee Ajjeesisaa jirutu jira.
Akkuma Warri Amaarraa Warra Garaan Ormaa ofkeessaa yaassan, nus Warra Garaan Ormaa wallaallan keeenya akka dhumu utuu beekuu shira kana injifanoo siyaasaa argachuuf xaxutu jira. Afaan miheeffatanii saba keenya Ollaa waliin walitti nubuusanii immoo mee ABOn bahee isiniif haalolukaa yeroo jedhan dhageenye. waan daninetiin wayyaanee qindeesite tahuu shakkii hin qabnu. Isaan kun siyaasaan ABO cabsanii Uummata biratti fudhatama argachuuf jecha kolkollee isaanii Facebooka irratti bobbaasanii yeroo isaan ABO irratti Ololan argina. Nuti uumata keenya dursina. Kanumti biyya bulchuu qabuyyu nama dhugaan uumata kanaaf quuqamee tahuu qaba malee nama uumata kijibaa, ummata keenya miidhamu calisee ilaalu tahuu hin qabu. Ummatan bakka buha namni jedhu, nageenya uumataa dursa malee Ummata ukkamsuuf hin hojettu.
Dhaaddachi Addissuu arraggaas dhaaddacha sababa barbaadanii Oromoo ittiin dhabamsiisani tahuuf deema. uumata keenya Wallallaa karaa fi bishaan qulqulluu waggaa 27 kessatti tokko illee utuu hojeeneef, Ollaa isaa waliin kan waggaa dheeraaf nagaan jiraatu walitti buusanii buhaa siyaasaa argachuuf duguuggaa sanyii irraan kan geessaa jirtu OPDOn, uummanni kun Bosona ABOn keesaa qubate tahuu waan hunateefidha. WBON kaampii haagalu jettee shiibaa gochaa kan jirtuufis utuu waan waadaa galte hin dalagiin Oromoo gaadihuuf akka tahe hubachuun barbachisaadha. Akkakiyatti WBOn waggaa 5niif bosona turuu qaba. Gochaan Suukkaneessaan akkasii utuu uummata keenyarratti raawatuu Oromoon Siyaasaan walqooduu dhiisnee, angahoota TPLF fiif bitaman Oggansa irraa arihuu dandahuu qabna. Lubbuu haadholii fi obboleyyan keenyaaf ho’a warra hin qabne warra Garaan Ormaa hin barbaadnu. Dr Abiy yoo mataa isaaf jedhe Hatattamaan uumata buqahe kana deebisee qubsiisuu fi deemee dawachuu qaba.
Ummata Gumuz keessaa namoota mursaa Qarshiin bitanii, Oromoo irratti kan bobbase, Abi illee Gumuzii fi liyyuu poolisiin Gumuz saaxilamuuf deemu. Kana keessa warri harks qabu caalaa TPLF fi Caasaa OPDP tahuu Oduun miliqxee harka keenya gahaabjirti. Warri dantaa sabaa keenyaa fallessan kan Afaaniin dammaa kan OPDO keessaa hatattamaan ariyatamuun warra sabaaf quuqamaniin bakka buhuu qabu. Addisuu arragaafi Fakkaattoni isaa, Aqabe higi…..adabamuun Angoo gadi dhiisuu qabu !!
Uummata Obbolaa Walitti buusanii tahu, dogogora Uumani illee miidihaan ifa godhani uummata tasgabeesuu irra, shira d
Ofiin dalagan waan beekaniif calisanii tahanii dawwatu. Shira ofiin Raawattan ABOtti quba qabatu.
ONN LIVE:- Onk : 01 2018 ODUU AMMee Magaalaa Naqqamtee irraa Lola Ummata Orommo fi humna addaa benishaangul Gumuz jiddu jiruu Haalaan Hammaatee jira. Lubbuu oromoo 23 fi mannen jireenyaa 600 ol akka barbadaa’e Waajirri Mootummaa Magaalaa naqqamtee addesse.
Beenishaangul Gumuzitti Rakkoo Nageenyaa Ummata Keenya irra Ga’e Ilaalchisee gabaasa Hojjetame.
[OBN 21 01 2011] Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii fi aanolee Oromiyaa ollaatti rakkoo nageenyaa uumameen ummata keenya irra miidhaan lubbuu, qaamaa fi qabeenyaa qaqqabee jira.
Rakkoo nageenyaa isa amma uumamee uummata buqqa’eef deeggarsa hatatamaa ni barbaachisa. kanaafis mootummaan Hojjechaa jira jedhan Dr Nagari Leencoo.
Ethiopia’s Challenge: Overcoming ‘Mafia’-Style Violence
Getachew oljira says:
I am in doubt if these things happen unknowingly, I mean the oromia boarder conflict from eastern to northern and to western and beyond. If not, could be an indication of total incapacity of the federal state or nearly collapsing. convalescence is a sign of death (mallatoon du’aa gagaba)